GAWAARIDA ON THE GEED: SIDA LOO MAAREEYO CAYAYAANKA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Waxaa jira lakabyo aan cunin caleemaha oo kaliya, waxay ku neefsadaan cirbadaha geed. Dad badan oo ka mid ah dadka degaanka xagaaga waxay qurxinayaan sirqoolkooda leh warshado waaweyn. Geedka dhirta ah wuxuu halis u jiraa wakhtiga - mararka qaarkood waxay heleysaa granules midab madow. Noocan oo kale ah ee dheeraadka ah ayaa ugu dhakhsaha badan u noqda gawaarida xayawaanka ah ee ku dhuftey laanta geedka.
Aynu ku baranno hababka badbaadinta cirbadaha ee muuqaalka jilicsan.
Caterpillar on the geed: sharaxaad iyo wareegga nolosha ee cayayaan ah
Xitaa cayayaanka yar-yar ee geed-geedka ayaa dhaawici kara geedaha ugu weyn. Marka ugu horeysa ee aad sameysid kooxo xayawaan leh caagado buni ah, wac dhawaaqa! Dhawrkii gawaarida laga arkay sawirro ayaa ku mashquulsan geedkii geedaha. Koofiyadu waxay u bislaadaan dirxigooda.
Ma taqaanaa? Cayayaanka waxay magaceeda u bixiyeen sababo la xiriira qaar ka mid ah geedi socodka geedka ukumaynta - xubin gaar ah (ovipositor) waxay hoos gelisaa lakabka epidermal ee jirridda ama caleenta, "jarida" "unugyada" Shakhsiyaadka waayeelku waxay badanaa u eg yihiin duqsiyada, si ay si fudud ugu jahwareeraan cayayaankaas muuqaalkooda.
Ka hor inta aanad bilaabin daaweynta, waxaa lagugula talinayaa inaad si sax ah u aqoonsato noocyada kala duwan ee cirbadaha on the geed. Red Sawfly - Dirxiga waa cagaaran wasakh ah oo madow, oo leh madax madaxiisa. Waxay ku nool yihiin kooxo. Dareemida welwelka ugu yar, waxay ka jawaabaan kor u qaadista jirka hore. Kuwani waa sawirada ugu khatarta badan, cirbadaha qaangaarka ah. Geed caleen ah macno ahaan wakhti gaaban ayaa keeneysa dhimashada warshado waaweyn. Geedo waaweyn ayaa lagu jabiyaa dhererka xagaaga geed-geed. Dalladahaasi waxay ku dhufanayaan qoryaha on geed, ka baxaya dhalaalid iyo shaatiinka dabaysha. Cayayaanka ayaa ah kuwa ugu khatarsan abuurka.
Aboorka Pine - dhicin-jiifin ah oo ukumo geel ah oo ku yaal cirbadaha qubayska toosan. Dhamaadka bisha koowaad ee xagaaga, siisay waxay ka soo baxaan ukunta, kuwaas oo si dhakhso ah u nuugaya cirbadaha iyo burooyinkooda. Dhalashada badan ee baalalladu waxay keeni kartaa qalajinta dhirta oo dhan.
Qaybta yurub ee dalkeena, irbadaha geedaha ayaa isku marjin kara noocyo kala duwan oo rinjiga ah. Sawirrada caanaha cas iyo casaanka ayaa aad u badan. Marmarka qaarkood, sawirada barafka iyo cayayaanka jilicsan ee caleemaha huruudda ah ayaa laga helaa. Waxay isku midka yihiin midba midka kale ee heerka dhaawaca soo gaadhay. Waxay ku kala duwan yihiin tirada jiilalka.
In gobollada dhexe ee Ruushka, cankabta caadiga ah waxay si adag u dhigaan ukumaha laba jeer inta lagu jiro xilliga kuleylaha ee farcankiisa - tani waxay sababtaa khasaare aad u daran geedaha.
Dhibaatada noocee ah nooca cagaarsho ayaa laga yaabaa in lagu sameeyo geedo waaweyn?
Dirxiga dhalinyarada ah ee geedaha sawfly wuxuu cunaa cirbado irbado, sidaas darteed, waa in la qaado tallaabooyinka xakamaynta sida ugu dhakhsaha badan. Qaybaha aan la isku haleynin ee cirbadaha ayaa bilaabay inay qalalaan, noqdaan huruud iyo lakab. Dhallin badan oo baaluqa ah ayaa cirbadaha cirbadaha gebi ahaanba ku riddaa.
Tirada badan ee dirxiga iyo la'aanta cuntooyinka iman kara waxay halis ugu jiraan inay jeexaan jilif, kaas oo dhawaan u horseedi doona qalajinta tiro badan ee laanta tufaaxa ee taajka.
Dhalinyarada dhalinyarada ah, oo ay ugu wacan tahay shaqo qabashada dirxiga, waxay jabi karaan saddex ilaa shan sano. Cayayaanka lafaha cayayaanka ayaa daciif u ah geedkii. Guryaha qurxinta ee geed-gaaban ee ay saameysay iyo qaabka guud ee muuqaalka goobta ayaa si weyn loo yareeyey. Cuncunka lagu celceliyo by dirxiga hal xilli ciyaareed wuxuu keeni karaa geerida tayada inta lagu jiro jiilaalka.
Waa muhiim! Kooxda halista ah waxay ku badan yihiin pines ka yar da'da soddon sano.
Waxaa ka mid ah cirbadaha qurxinta, Pines ee Weymutov iyo Banks ayaa ah kuwa ugu saameynta badan. Pines oo koraya sarreeyaasha gargaarka ee leh qalalan qoyan, ciid iyo ciidda dhoobo ah, ama geedo cidla ah ayaa badanaa waxyeelo soo gaadhay.
Gawaarida on the geed: sida loo maareeyo cayayaan ah
Sawirro Sawfly ayaa caleemaha caleemaha iyo burooyinkeeda ku dhuftey, markaa waa inaad doorataa qaabka habboon ee xakamaynta.
Ma taqaanaa? Xitaa xitaa muddo gaaban ee joogitaanka sawfly ee marxaladda rinjiga si ay u keenaan waxyeello weyn si ay geedkii ilaa buuxa gebi ahaanba xiro.
Qalabka farsamada iyo daaweynta dadka
Waxaad la dagaallami kartaa sawirro sawir ah adiga oo adeegsanaya farsamada. Burooyinka cayayaanka iyo caleemaha geedo leh mashiinka madow waa in laga saaraa geedkii oo gubay. Si loola dagaallamo cagaaran iyo madow, mid waa inuu si joogto ah u qodo carrada agagaarka jirkiisa, baabi'iyaa hoolka iyo dirxiga.
Soo qaado dirxiga gacanta gacanta galoofyada iyo muraayadaha geedaha yaryar. Qaaxadu waxay si firfircoon uga jawaabtaa khatarta. Si loo ilaaliyo "gaduudan" dhiig oo leh walxo xasaasiyadeed.
Kiimikooyinka ka soo horjeeda taayirada
Khubaradu waxay ogyihiin sida si firfircoon uga buufin geed geedo laga soo iibsado. Dab-bakhtiin iyo cagaaran (madow) ayaa lagu jabin karaa isticmaalka daawooyinka cayayaanka ee "Aktely" iyo "Confidor".
Waxaad ku buufin kartaa dhirta diyaarinta asalka dabiiciga ah:
Waxaa ka mid ah hababka synthetic ee loogu talagalay taranka dhalinyarada yar ee salka madow, daroogada synthetic loo yaqaan "Arrivo" ayaa sheegay in si fiican naftiisa.
Waa muhiim! Haddii aad go'aansatay sida aad ula dagaalami lahayd suufka geed leh ee kiimikada, waxaa lagugula talinayaa inaad tijaabiso daawada dhirta keliya ee geed ka hor inta aanad bilaabin daaweynta. Haddii 24 saacadood gudahood xaaladdu ka timaaddo geedaha qallajiya maaha mid sii xumaanaya, waxaad codsan kartaa qalabka dhammaantiis oo lagu beeray goobtaada.
Wixii wax ku ool ah, khubarada ayaa kugula talin kara kiimikooyinka kale. Had iyo jeer si taxaddar leh u akhri tilmaamaha si taxadar leh. U fiirso qawaaniinta amniga intii lagu guda jiro geedi socodka geedaha cayayaanka.
Ka hortagga cateriga ah on geed
Ka hortagga lambarrada yaryar waa in la eego xaaladaha cimilada. Sawflies waxay ku jirtaa xilli diiran oo qallalan (dhammaadka guga - bilowgii xagaaga). Haddii kuleylka kulaylaha la filayo, u digtoonow. Xilliga roobka ayaa khatar badan u ah geedo lakabka ah - waxay inta badan u dhintaan cudurrada.
Cayayaanka ku xayawaanka ciidda agagaarka geed geedka, sidaas darteed, si looga hortago, waa lagama maarmaan in la qodo ciidda agagaareysa ee bisha November. In xilliga gu'ga, waxaa muhiim ah in la burburiyo dirxiga by buufin leh cayayaanka insecticidal iyo nafleyda ka soo sawfly geed.
Iyadoo lagu fekerayo halabuurka muuqaalka, dhirta geedka cirridka ah ee ku dhow geedaha geedka duufanta ah, duurka qoryaha ah. Way yar tahay sawirada. Beddelaadda geedaha geedaha ah iyo noocyada geedka geedi-socodka ayaa adkeynaya dumarka inay raadiyaan cunto. Ka qodo dhulka hareeraha dhammaadka xagaaga - bilawga xilliga dayrta si qoto dheer ah 7-10 cm, Si kastaba ha ahaatee, ha badin, si aanay u waxyeeleynin xididdada geedka.
Soo jiido shimbirahaaga boggaaga oo ku quudiya cayayaanka geedaha cagaarka ah si ay u noqdaan kuwa looxyo. Si tan loo sameeyo, ku rid gogolka sanduuqyada geedka ee geedaha, abuuro sanduuqyada cowska. Cilladaha soo jiidashada, ichnumonidoono, tachins, qoob-ka-baxa kaynta, guluubka dhulka ayaa waxtar u yeelan kantaroolka cayayaanka. Bannaanka ubaxyada badan ee beerta - difaacayaasha dabiiciga ah ee geedaha ayaa noqon doona marti joogta ah oo ku yaalla goobtaada.